I-Mountain Dew inombala oluhlaza okwesibhakabhaka kuwo kodwa uke wacinga malunga nokwenza UKUPHELELE ukukhanya ? Nantsi indlela oyenza ngayo:
Khanyisa kwizinto eziMnyama zeNtaba zeNtaba
Ibhotile ye-20-oz ye-Mountain Dew ™ (kodwa nayiphi na ibhodlela engu-20-oz iya kusebenza)
i-glowstick okanye i-lighttick
iisisi okanye abacimi bee wire
Dlulisa okanye uphuze konke kodwa umthamo omncinci wesiselo esiphuzo (~ 1/4 intshi). Ukuba ibhotile yakho ayinalutho, kongeza amanzi ambalwa.
Yongeza i-squirt yetswelo yokulahla.
Sebenzisa izikhenkce okanye abaqambi bee-wire ukusika i-glowstick. (Andiyiphakamisi ukusebenzisa i-steak knife, kodwa ukuba konke unokufumana, kuya kusebenza.)
Ungenanto yokukhupha intonga ebhotile. Ndasebenzisa iindidi ezincinci ezinama-intshi ezide zenzelwe ukusetyenziswa njengamacici, ngoko ndabanqumla kwisiqingatha ndaza ndaziphosa ebhotile. Ukuba i-liquid ayiyi kuhamba, ungayifaka i-glowstick ibe yizicucu uze udibanise iziqwenga kwibhotile.
Yongeza i-1-3 captives ye-hydrogen peroxide.
Yongeza i-pinch ye-baking soda uze unamathele ngokukhawuleza ibhotile.
Khanyisa izibane (ukuba awukho kakade) kwaye ugxininise ngamandla ibhotile.
Mhlawumbi uqikelele oku, kodwa ndiya kuthetha njalo ... ungaphuzi izinto ezibhalwe kwibhotile . Yigcine ingabikho kubantwana okanye nabani na umntu onokulingwa ukuba aphuze umbane. Imijelo yamanje ayiyinto engcolileyo, kodwa loo nto ayibenzeli kakuhle ukuba nidle. Ngokufanayo, ukuhlanjululwa kwamanzi akungadli.
Akukho nto ekhethekileyo ngeDew Dew. Enyanisweni, awufuni ngisho ne-soda. Ibhotile ebomvu ebomvu yenziwe ngokusetyenziswa kwamanzi amaninzi, i-Squirt of Dawn, i-red glowstick ebomvu, i-capfuls ye-hydrogen peroxide kunye ne-pinch ye-baking soda.
Awudingi ngokupheleleyo iperoxide okanye i-baking soda. Le projekthi isebenza xa ungeze i-detergent encinci kunye nequlatho ye-glowstick ephukile kuyo nayiphi na ibhotile ye-20-oz engenanto.
Nangona kunjalo, ukuba wongeza i-peroxide kunye ne- baking soda , ufumana ukukhanya okukhawuleza ngokukhawuleza. Jabulela ukukhanya ngelixa unako ngenxa yokuba impendulo ye-chemiluminescence ihamba ngokukhawuleza. Ukuba usebenzisa i-peroxide uya kuphawula ukukhanya okuqala ukuphela ngaphakathi malunga nesiqingatha somzuzu.
Gwema ukudibanisa kunye neziqulatho zentonga yokukhanya. Coca nayiphi na intsalela kwisikiti sakho okanye esinye isixhobo sokusika. Ukuba ufumana nayiphi na imveliso kwesikhumba, supha ngokukhawuleza ngamanzi ashushu.
Indlela yokwenza i-Fake Glass
Indlela yokubhala iNgxelo yomculi ukuhambelana neMifanekiso yakho
I-8 Best Car Bike Racks Yokuthenga ngo-2018
I-Gameplan ekhuselayo: Umgibe ongabikhoyo
Oomama abakhulu beGrike bamaGrike